हिमाल खबरपत्रिका | केन्द्रमा मध्यमवर्ग
समाजमा मध्यमवर्गको बढ्दो दबदबाले गरीबकेन्द्रित राजनीतिको प्राथमिकता मात्र फेरिएको छैन, यो वर्ग रिझाउन दलहरू आधारहीन समृद्घिको आकर्षक तर उडन्ते र फजुल नारा लगाइरहेका छन्।
दुई वर्षयता मात्र नेपालका सडकमा करीब ५० हजार नयाँ निजी कार, जीप र भ्यान थपिए । यीसहित देशभरका साँघुरा सडकमा ठेलमठेल हुने गरी हुइँकिने निजी कार, जीपको संख्या सवा दुई लाख नाघेको छ । एक दशकअघि मात्र यो संख्या ८८ हजार हाराहारी थियो । सडक ढाक्ने गरी थपिएका मोटरसाइकलको संख्या त योभन्दा अचाक्ली छ । देशभरका सडकमा अहिले २२ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल गुडिरहेका छन्, जुन संख्या दश वर्षअघि चार लाख हाराहारीमा थियो । अर्थतन्त्रमा सुस्त गतिको विस्तारका बाबजूद देश, विदेशबाट आर्थिक अवसर छोप्न भइरहेको बढोत्तरीको नतिजा हो, निजी सवारी चढ्नेको संख्यामा भएको यो वृद्धि ।
२०४८ सालमा कुल जनसंख्याको करीब आधा हिस्सा गरीबीको रेखामुनि थियो । अहिले त्यो २१ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ । दुई करोड ७८ लाख मोबाइलका सीमकार्ड वितरण हुनुले देखाउँछ, धेरै नेपालीका हातमा मोबाइल फोन पुगेको छ । न्यून आय भएका गरीबको संख्या घटेर निम्न मध्यमवर्गको उदय त भएकै छ, निम्न मध्यमवर्ग पनि उच्च आय भएको मध्यमवर्गमा उक्लिएको छ । मध्यमवर्गको उदयले उपभोग्य वस्तुको माग बढाएको बढायै छ– सवारीदेखि सुनसम्म, एफएमसीजी (फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स) देखि शपिङ मल विस्तारसम्म । मध्यमवर्ग विस्तारकै उपज– टोलैपिच्छेका ‘भट्टी’ लाई सुग्घर र देशीविदेशी परिकार पाक्ने रेस्टुरेन्टले विस्थापित गरेका छन्, ब्यूटीपार्लरदेखि र फेसन हाउस खुलिरहेका छन् । मध्यमवर्गको उदय–विस्तारले समाजको अर्थ–राजनीतिक परिदृश्य पनि बदल्दैछ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि हुन लागेको पहिलो आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यो तस्वीर प्रष्ट देखिन्छ । आउँदो १० र २१ मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्र पनि मध्यमवर्ग लक्षित नै छन् । वर्गीय राजनीति, अझ् त्यसमा पनि सर्वहारावर्गको मुक्तिको रटान लगाउने वामपन्थी दलहरूका घोषणापत्र समेत मध्यमवर्ग केन्द्रित छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ! उम्मेदवार चयनमा समेत गरीब र निम्न मध्यमवर्गका कार्यकर्ताभन्दा धनी र उच्च मध्यमवर्ग दलका रोजाइमा परेका छन् । चुनावका वेला ‘पैसाको खोलो’ बगाउन नसक्नेहरू राजनीतिमा टिक्न असम्भव हुँदै गएको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण, राजनीतिमा मध्यमवर्गको दबदबा नै हो ।
मध्यमवर्गलाई आश्वस्त नपारेसम्म राजनीतिको पाङ्ग्रा नगुड्ने ठानेरै हुनसक्छ, दलहरूको सम्पर्क वकील, पत्रकार, शिक्षक, निजामती कर्मचारी, इन्जिनियर, डाक्टरलगायतसँग ज्यादा छ किसान, मजदूर, विद्यार्थी, बेरोजगार आदिसँग पातलिंदै पनि । राजनीतिको लक्ष्य जनताको जीवनस्तर उठाउनु भनिए पनि अहिले यो मध्यमवर्गमा प्रिय बन्नमै केन्द्रित छ । आफ्ना काम गराउन सिंहदरबारमा दैनिक झुम्मिने भीड नीतिनिर्माणमा मध्यमवर्गीय पहुँचको अर्को प्रमाण हो । राजनीतिशास्त्री खनाल यस्ता समूहले जनमत निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले पनि दलहरूले मध्यमवर्ग नभई नहुने बुझेको बताउँछन् । “मध्यमवर्ग आफ्ना लागि नभई नहुने वर्ग हो भन्ने दलहरूले बुझेका छन्” प्रा. खनाल भन्छन्, “त्यसैले मध्यमवर्ग अहिलेको राजनीतिको केन्द्रमा छ ।”
थप सुविधा र सम्पत्तिको चाहनामा कुदिराख्ने चरित्र भएकैले होला, नेपाली मध्यमवर्गमा अहिले तीव्र गतिमा कुद्ने रेल, द्रुत मार्ग, फराकिला सडक र ठूल्ठूला भवनको तृष्णा देखिन्छ । त्यसलाई बुझेरै दलहरूले पूरा नहुने समृद्धिका सपना बाँडिरहेका छन्– रेल, स्मार्ट शहर आदि अनेकन् नाममा । तर, सपनाका घोषणा गरिए जति आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकास गर्न नेपालसँग न स्रोत साधन छ, न व्यवस्थापकीय क्षमता । विकासको आवश्यकता तलबाट माग हुनुको साटो माथिबाट थोपर्ने अभ्यासमा दलहरू केन्द्रित छन् । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र समाजको प्राथमिकता अर्कै हुनुपर्ने वेला फजुल प्रतिबद्धता र सपना बाँडिएको बताउँछन् । “कहाँ र कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो” मिश्र भन्छन्, “दलहरूले पूरा नहुने समृद्धिको सपना बाँडेर सबैलाई अलमलमा पारेका छन् ।”
“दलहरूले प्रभावशाली मध्यमवर्ग रिझाएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ, राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न मध्यमवर्गको ठूलो भूमिका हुन्छ।”
आम जनताको मुख्य चासो अहिले पनि पुग्दो पोषणयुक्त खाना, आवास, रोजगारी, औषधिमूलोको प्रबन्ध वा छोराछोरीको गुणस्तरीय शिक्षादीक्षामै छ । बिग्रँदो पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनका असरले खेतीपातीलगायत सबैतिर देखिन थालेका अनेकौं समस्या, महँगीले दुरुह बनाएको जीवन, न्यूनतम सेवा प्रवाहमा राज्यको असफलताले थिलथिलो पारेको दैनिकी तिनका यथार्थ हुन् । यस्ता अहम् अर्थ–सामाजिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरेर दलहरू भने ‘समृद्धि’ भन्दै आधारहीन सपना बाँडिरहेका छन् । दलहरूले देखाएका सपना कतिसम्म हावादारी छन् भने डेढ दशकमा बल्लतल्ल दोब्बर भएको औसत आयलाई एकाध वर्षमै कैयौं गुणा बढाउने घोषणा गरेका छन् । अचाक्ली चर्चा र महŒव दिइएको द्रुत रेल आइहाले को चढ्छन् र के के वस्तु रेलमा हालेर चीन पठाउने हो भन्नेबारे छलफलसम्म भएको छैन । किनभने, महँगो प्रविधिको यो रेलको यात्रा शुल्क धान्ने आर्थिक क्षमतामाथि प्रश्नै प्रश्न छन् ।
बिराएको बाटो समाज र राजनीति यो अवस्थामा कसरी पुग्यो ? यसका कारणहरूसँग उदारीकरणको अभ्यास पनि जोडिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारले सबैका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वासमा बेलगाम अभ्यास गरिएको उदारीकरण अथाह लाभसँगै पन्छाउनै नमिल्ने विसंगतिको भासमा समेत परेको छ । बेलगाम बजारबाट मिलेमतोमा स्रोत दोहन गर्ने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ मार्फत यौटा समूहले बेहिसाब लाभ उठाए पनि अनियन्त्रित र फौबन्जारको जगजगी भएको बजारले आम जनतालाई मर्कामा पारेको छ । विडम्बना ! दलहरू व्यवस्था बदलिएको लाभ लिन नसकेका समूहलाई लाभ दिन मात्र चुकेका छैनन्, कसरी त्यस्तो लाभ दिलाउने भन्नेमा चिन्तित समेत देखिंदैनन् । राजनीतिक नारामा समाजवाद भनिए पनि पछिल्ला दशकहरूमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नवउदारवादी र पूँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाकै अभ्यास गरिरहेका छन् ।
“कहाँ र कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो, दलहरूले पूरा नहुने समृद्घिको सपना बाँडेर सबैलाई अलमलमा पारेका छन्।”
वित्तीय क्षेत्रले पछिल्लो दशकमा ठूलो छलाङ मारेको दाबी गरिरहँदा त्यसलाई गरीब र सामान्यजनको पहुँचमा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा दलहरूको चासो देखिंदैन । सम्पत्तिको मूल्य बढाएर धनीलाई अझै धनी बनाउने, तर गरीबलाई कर्जा नदिने अहिलेको वित्तीय मोडलको लाभ केही उच्च र मध्यमवर्गमा सीमित छ । पूँजी निर्माणको वित्तीय औजार सीमित समूहको हातमा छ, जसले पूँजीलाई धनीहरूमा एकीकृत गरिदिएको छ । गरीब युवालाई वस्तुका रूपमा विदेशी श्रम बजारमा बेचेर आएको रेमिटेन्सबाट त्यही वर्गले लाभ लिइरहेको छ । धनीलाई थप धनी बनाउने वित्तीय मोडल बदल्न जरूरी भइसकेको बताउने पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “अहिलेको आर्थिक र वित्तीय मोडल ‘फेयर’ होइन, यसले आम जनतालाई लाभ दिंदैन ।”
आफूलाई समाजको ठूलो तप्काको बृहत्तर हितका लागि समर्पित भनिरहेका दलहरू आम सरोकारका मुद्दाबाट विचलित भएर सपना बेच्नतर्फ किन लागे ? राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल राजनीतिमा प्रभावी मध्यमवर्गलाई खुशी नपारुन्जेल आफ्नो पक्षमा जनमत नबन्ने दलहरूको बुझइलाई यसको कारण मान्छन् । मध्यमवर्गलाई रिझउने नाममा दलहरूले ‘पपुलिज्म’ को व्यापार गर्दा सार्वजनिक चासोका मुद्दाहरू भने ओझेल परेका छन् । मध्यमवर्गको विस्तार अर्थतन्त्र र समाजका लागि हितकर भए पनि सिंगो राजनीतिको ध्यान र प्राथमिकता उनीहरूमा केन्द्रित हुनु राम्रो संकेत होइन ।
मध्यमवर्गको राजनीतिक चरित्र के हो ? यो परिवर्तनका लागि गतिशील शक्ति हो या परम्परागत रुझन भएको यथास्थितिवादी शक्ति भन्नेबारे विद्वानहरूबीच रस्साकस्सी छ । मध्यमवर्गलाई यथास्थितिवादी भन्नेहरू यसको राजनीतिक आस्था र व्यवहार मूर्त र स्थिर नहुने हुँदा यसलाई अवसरवादी मान्छन् । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल आफ्नो थप उत्थानका लागि ठूलो परिवर्तन हुने गरी निर्वाचनमा मत दिए पनि सामाजिक विप्लव वा उथलपुथल यो वर्गले नचाहने बताउँछन् । भन्छन्, “मध्यमवर्गले निर्वाचनमा सुरक्षित र यथास्थितिकै दललाई रुचाउँछ ।” मध्यमवर्गले रहनसहन, चालचलन, भाषा इत्यादिमा एलिट समूहको नक्कल गर्न खोज्छ । आफू उठेर आएको वर्गभन्दा पुग्न चाहेको वर्गको आकर्षणले तान्ने हुँदा सामान्यतया ऊ सत्ताको विरोधमा नभई यथास्थितिको पक्षपोषक हुन्छ । नीतिगत अस्थिरता नचाहने, बरु आफ्नो उत्थान चाहने हुँदा यो वर्ग यथास्थितिकै संरक्षक हुन्छ ।
“मध्यमवर्गले निर्वाचनमा आफ्नो स्वार्थको सुरक्षा गर्ने यथास्थितिकै दललाई रुचाउँछ।”
अर्काथरी चाहिं ठूला राजनीतिक–सामाजिक विद्रोहमा मध्यमवर्गलाई हावी देख्छन् । तिनैमध्येका पूर्वसचिव खनाल नेपालमा भएका जनआन्दोलन र माओवादी विद्रोहमा मध्यमवर्गकै भूमिकालाई प्रमुख मान्छन् । शक्तिमा पुग्ने महŒवाकांक्षाले गर्दा मध्यमवर्गले स्थायी सत्तामा निरन्तर धक्का दिइरहेको बताउने खनाल भन्छन्, “निर्वाचनमा एउटालाई हराएर ह्वात्तै अर्कोलाई ल्याउने गरी भोट स्वीङ गर्ने पनि मध्यमवर्ग नै हुन् ।”
मध्यमवर्ग नेपाली राजनीति र समाजको उपेक्षा गर्नै नमिल्ने वास्तविकता भइसकेको छ । भविष्यको अनिश्चिततामा रहेको यो वर्गलाई समृद्धि, विकास र राष्ट्रवादको नाराले लोभ्याउँछ । त्यही अवसर छोप्न दलहरूले पूरा नहुने प्रतिबद्धताको जाल फ्याँकिरहेका छन् । राष्ट्रवाद र समृद्धिको बहस काठमाडौंसहित मध्यमवर्गको विस्तार भएका देशभरका प्रमुख शहरमा प्रभावी बनेको छ । तर, यस्तो नाराका पछाडि अराजकता र निरंकुशता समेत मिसिएर आउने आशंका गर्नेहरू पनि छन् । तिनैमध्येका अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको ‘अर्थतन्त्रमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका हुने’ भन्ने विषय पर्नु एकाधिकारको छनक भएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “वाम गठबन्धनको चरित्र र बोली सुन्दा निर्देशित अर्थतन्त्रतिर जाने जोखिम पनि छ ।”
पेशा–व्यवसायमा आवद्ध तथा नियमित आम्दानी गर्ने समूह नेपालमा मध्यमवर्गका रुपमा चिनिन्छन् । सामाजिक पहुँच–प्रभाव, भूमिका, इज्जत र हैसियतका आधारमा पनि मध्यमवर्गलाई छुट्याइन्छ । ‘एलिट’ भन्दा तलको र निमुखा जनताभन्दा माथिल्लो वर्गको रुपमा समाजमा यसको अस्तित्व हुन्छ । एलिट जस्तो शासनसत्तामा प्रभाव नभए पनि तिनको ठाउँमा आफूलाई देख्न र शक्तिशाली बन्न चाहने मध्यमवर्गको उदयसँगै सामाजिक राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा समेत वदलाब आउँछ । खनाल भन्छन्, “आफ्नै क्षमता र बलबुतामा विभिन्न पेशा–व्यवसायमा रहेको चेतनशील समूह मध्यमवर्ग हो ।”
बढ्दो शहरीकरण, रेमिटेन्स प्रवाह, घरजग्गाको बढ्दो मूल्य, सेवा क्षेत्रको विस्तार, बढेको ज्यालादर, विदेशी सहयोगमा वृद्धि जस्ता कारणले मध्यमवर्गको अभूतपूर्व विस्तार हुनपुगेको छ । पूर्व अर्थसचिव खनाल संसारभर नै महिलाहरू कामका लागि घरबाट निस्कन थालेपछि परिवारको आम्दानी बढेको र त्योसँगै मध्यमवर्ग थपिएको बताउँछन् । नेपालमा २०४८ पछि नै घरभन्दा बाहिर महिलाको सक्रियता बढ्यो । अर्कोतिर, शहर–नगरमा बस्नेको संख्या अहिले डेढ करोड पुगेको छ । जबकि, तीन दशकअघि ९३ प्रतिशत नेपाली ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्थे । अहिले शहर बजार मात्र होइन, सडक पुगेका देशका कुनाकाप्चामा समेत जग्गाको भाउ आकाशिएकाले सानो टुक्रा जग्गा बिक्री गर्ने परिवारको हातमा लाखौं रुपैयाँ पर्छ । मध्यमवर्ग थपिनुको अर्को कारण हो, यो ।
विश्व ब्यांकको अध्ययनले सन् १९९५/९७ मा नेपालमा ७ प्रतिशतमा सीमित मध्यमवर्ग २२ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्नुमा सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई मुख्य कारण मानेको छ । हुन पनि अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान अहिले ३० प्रतिशतमा झरेको छ, जुन डेढ दशकअघिसम्म ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । बरु, मध्यमवर्ग सहभागी सेवा क्षेत्रको भूमिका अर्थतन्त्रमा ५६ प्रतिशत पुगेको छ । शिक्षित जनसंख्या बढ्दै जाँदा रोजगारीको अवसर बढ्ने र त्यसबाट आय पनि बढ्ने हुँदा मध्यमवर्गको आकार थपिन्छ । नेपालमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९० प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ मा यो दर ५० प्रतिशत थियो । विश्व ब्यांकको अध्ययनले विद्यालय जान नपाएकाहरूमा मध्यमवर्ग १२ प्रतिशत मात्र रहेको र कम्तीमा ११ वर्ष विद्यालयमा अध्ययन गरेकामध्ये मध्यम वर्गको संख्या ५७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
व्यवस्थित किनमेल बजारका रुपमा चिनिएको विशाल बजारको चर्चा शुरुआतमा विद्युतीय भर्‍याङ भएको चमकधमक बजारका रुपमा हुन्थ्यो । शहरका धनाढ्यले किनमेल गर्ने ठाउँका रुपमा बुझिने यसमा किनमेल गर्न मध्यमवर्ग हत्तपत्त छिर्दैनथे । अहिले काठमाडौंमा मात्र तीन दर्जन हाराहारी व्यवस्थित शपिङ मल छन्; धरान, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी, इटहरी, बुटवल, नारायणगढ, हेटौंडा लगायतका शहरमा पनि यो संस्कृति विस्तार भएको छ । स–साना किराना पसलभन्दा आफैं सामान झिकेर छानीछानी ल्याउन पाइने डिपार्टमेन्टल स्टोरतिर मध्यमवर्गले आँखा डुलाउन थालेपछि किराना पसल विस्थापित हुने क्रम बढेको छ । खानपानको प्रवृत्ति फेरिएको छ । वर्षेनि रु.३ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी मूल्यको मदिरा आयात हुन्छ, स्वदेशी उत्पादन उसैगरी बढिरहेको छ । मासु, फलफूल र तरकारीको उपभोग बढेकाले वर्षेनि रु.५० अर्बभन्दा बढीको आयात भइरहेको छ ।
आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर सजिलै रकम बचत गर्न सकेरै होला, सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीको आयात मात्र वार्षिक रु.४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी छ । गुणस्तरीय शिक्षादीक्षाका लागि छोराछोरीलाई निजी स्कूल वा कलेजमा पढाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा निजी स्कूल र कलेजको संख्या ९ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । दुई दशककै यो छलाङ आफैंमा अपत्यारिलो झैं लाग्छ । दाउरालाई एलपी ग्याँसले शहर मात्र होइन, गाउँमा समेत विस्थापित गरिरहँदा डेढ दशकमा ग्याँसको खपत ७५० प्रतिशतले बढेर दुई लाख ६० हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । दुर्गममा पनि रिसोर्ट र होटलहरू खुलेका छन्, जहाँका ग्राहक प्रायः स्वदेशी नै छन् । हवाईयात्रुको संख्या बढेपछि एअरलाइन्स र जहाजको संख्या मात्र थपिएको छैन, वार्षिक १४ लाख बढीले आन्तरिक हवाई यात्रा गरिरहेका छन् ।
मध्यमवर्गको विस्तारसँगै बसोबासको तरिका पनि फेरिएको छ । देशभर व्यवस्थित सामूहिक आवासको संस्कृति फैलिइरहेको छ । हाइराइज भवन (अपार्टमेन्ट) को संख्या बढ्दो छ । करीब १५ हजार युनिट अपार्टमेन्ट बनिसकेका छन् भने ६ हजार युनिटभन्दा बढीका घरसहितका हाउजिङ परियोजना बनेका छन् । मध्यमवर्गलाई आवास निर्माणका लागि मात्रै मुलुकको वित्तीय क्षेत्रले रु.१ खर्ब ७४ अर्ब लगानी गरेको छ । गरगहनाको जोरजाम गर्न सुनचाँदीको आयात बढेको बढ्यै छ । गत वर्ष मात्रै रु.२७ अर्बको सुन र रु.१० अर्बको चाँदी आयात भएको छ । आम्दानी गर्ने व्यक्ति र संस्थाको बढोत्तरीसँगै देशमा नियमित करदाताको संख्या १६ लाख नाघिसकेको छ । मध्यमवर्गको खल्तीमा दाम नछुट्न थालेकाले प्राथमिक शेयर जारी गर्ने कम्पनीको शेयर खरीदका लागि सयौं गुणा बढी आवेदन परिरहेको छ । यी सबै उदाउँदो मध्यमवर्गका परिणाम हुन् ।